Phupha ngeOfisi Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ukutyelela iofisi kunye nokugcwalisa ingxaki kuhlala kuyinto edinisayo. Amaxesha amade okulinda aqhelekile kwaye ngamanye amaxesha uziva unenceba yakho ithatha indawo, yokuba nabasebenzi abanobuhlobo abanyamalali ngokupheleleyo.
Xa i-ofisi yomyalelo woluntu inemoto engavumelekanga kwaphela ukuba ipake, umqhubi wemoto uhlala ekhulisa iimvakalelo ezimbi malunga nabasebenzi beofisi, nokuba ayilotyala labo. Nangona kunjalo, ayisebenzi ngaphandle kweofisi. Nokuba ufuna ukufaka isicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza, imoto ifuna ipleyiti entsha yelayisensi, okanye umntwana kufuneka abhalise njengommi omtsha; Kuzo zonke ezi meko kufuneka igunya likarhulumente elihambelanayo.
Ithetha ntoni iphupha "iofisi" kuwe? Ungatolikwa njani iphupha lakho?
1 Uphawu lwephupha «iofisi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iofisi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iofisi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iofisi» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yamaphupha "iofisi" ifanekisela ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha ukunciphisa okwakho Libertad. Umphuphi unokukwenza ngokungaphelelanga kwiminqweno yakhe. Kweli phupha imvakalelo yengcinezelo iyavela kwaye iphupha lingathanda ukubaleka. Kwiimeko ezinqabileyo, uphawu lwephupha "iofisi" likwatolikwa ngendlela yokuba iphupha sele linezibophelelo ebomini bokuvuka kwaye ungathanda ukuthatha uxanduva ngakumbi apha.
Ukucinga iofisi okanye iodolo ephupheni kunokuba liphupha el mundo ukuvuka. inkinga zisa. Ukuba iphupha linomsebenzi ephupheni, ukutolikwa ngokubanzi kwephupha kukubonisa ukuba unokufikelela kuphela kwiinjongo zakho ezinqwenelekayo ngeendlela ezingaqhelekanga. Kananjalo oku kuya kuba noxinzelelo kuye kwaye kuya kufuneka atyale ixesha elininzi.
Mhlawumbi le meko yamaphupha nayo inokuchazwa njengenkxalabo yesondlo. Ukuphulukana nesikhundla okanye ukuthinjwa okungafunekiyo ephupheni kunokutolikwa njengokulahleka kwezinto ezixabisekileyo okusondeleyo.
Umbono wesakhiwo seofisi ephupheni ufuzisela ukuphupha owakho Ithemba ayizukuzaliseka kwihlabathi eliphaphamayo. Umsebenzi waseofisini ephupheni utolika ukutolikwa ngokubanzi kwephupha njengokudelela umhlobo ebomini bokuvuka. Nabani na owamkela igosa elinebrifkheyisi esandleni sakhe kwihlabathi lamaphupha kufuneka ajongane namaxesha anzima kunye nezoqoqosho.
Uphawu lwephupha «iofisi» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, uphawu lwephupha "iofisi" lumele ukukhubazeka kwi yokuphila kunye nokuziphucula ngokwakho ebuthongweni ngezibophelelo ezininzi ebomini bokuvuka. Abaphuphi kufuneka bakhathazeke kwaye balinde izikhundla ezimbalwa.
Ukuqikelelwa kwesikhundla ephupheni kufanele kubonise kumphuphi ukuba uzama nzima kakhulu ukwenza izinto eziphezulu kwihlabathi elivukayo. Kufuneka ubekhona kuyo Isiseko sezibakala bambelela kwaye unciphise ukulindela kwakho kwiiprojekthi ezizayo.
Ukuba iphupha liya eofisini ephupheni liyokwenza into, uphawu lwephupha "iofisi" lithetha kuye, ngokokuchazwa kwengqondo ngephupha, ukuba ufuna ukwenza into ebonakalayo kuye wonke umntu kwihlabathi elivukayo. Oko kukuthi, iphupha likuxelela ukuba ukulungele ukuzibophelela ekugqibeleni. Oku kunokuhambelana nombutho wakho.
Ngokukodwa ukuba iofisi iyabonakala ephupheni njengeofisi yobhaliso, uphawu lwephupha lunokusetyenziswa njengesigqubuthelo. ulwalamano ukutolikwa ngaphandle. Ngokumangalisayo, le meko yamaphupha ibonakala rhoqo kwimeko yeembambano kwesi sibini okanye kwimeko yokoyika ukwahlukana kunxulumene nomtshato wokwenene okanye ofanayo.
Uphawu lwephupha «iofisi» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kutolika uphawu lwephupha "iofisi" njengenye Uthintelo yengqondo yokomoya.
Ukuphupha iNombolo 7